UEFA oo sheegtay inay xagaagan tijaabinayso in la isticmaalo beddelka 4-aad – Gool FM
UEFA oo sheegtay inay xagaagan tijaabinayso in la isticmaalo beddelka 4-aad
Raage June 1, 2017
(Zurich) 01 Maajo 2017 – UEFA ayaa ku dhawaaqday inay tijaabin doonto hannaanka bedelka 4-aad inta ay socdaan tartamada iyada hoos taga oo uu ku jiro Koobka Da’yarta Yurubb ee UEFA Under-21 Championship.
Kubadda cagta ayaa sii casriyoobaysa iyadoo waxyaabihii ugu dambeeyay ee la tijaabiyay ay ka mid yihiin farsamada goal-line technology iyo hannaanka muuqaalka kaalinta garsooraha ee VAR (video assistant referees).
Yeelkeede, UEFA ayaa sheegtay inay tijaabin doonto beddelka 4-aad ee la adeegado waqtiga dheeriga ah iyadoo loo adeegan doono koobka gabdhaha women’s Euros iyo Under-19 Championship, iyo tantanka wiilasha Da’yarta Under-21 iyo Under-19 tournaments.
Habka bedelka laacibka 4-aad ayaa waxaa horay loogu tijaabiyay Koobka Kooxaha Adduunka ee Club World Cup bishii Diseember, halkaasoo uu Alvaro Morata ahaa laacib bedel kusoo galay xilliga dheeriga ah.
Tartamada FA Cup iyo Scottish Cup ayaa sidoo kale tijaabiyay hannaankan.
DAAWO: Franck Kessié oo hadda ka baxay xarunta Cassa Milan (Goorma ayaa la saxiixayaa heshiiska?)
UEFA oo abaal marin siinaysa halyeey Francesco Totti